UHulu's 'Hellraiser' Reboot uyiJaw-Dropping NgokukaDavid S. Goyer - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo IHulu's 'Hellraiser' Reboot yiJaw-Dropping NgokukaDavid S. Goyer
IHulu's 'Hellraiser' Reboot yiJaw-Dropping NgokukaDavid S. Goyer
Ilukuluku lethu lizoba yinganekwane ngisho nasesihogweni
by UTrey Hilburn III September 14, 2021 4,622 ukubukwa
Ukuza kukaHulu I-Hellraiser kuyathakazelisa njengesihogo. Ithalente elihlanganiswe nale nto lithembisa kakhulu. UDavid Bruckner ubekade esohlwini lwami lwamafaves ebuyela emuva Isibonakaliso. Ubelokhu eqhubeka nje nempahla. Indlu Yasebusuku futhi Isiko zombili zazivelele futhi zithusa ngokweqiniso. Ngakho-ke, ngubani ongcono ukuphatha i I-Hellraiser qala kabusha. A I-Hellraiser lokho "kudonsa umhlathi" ngokusho komkhiqizi, uDavid S. Goyer.
“Ngizosho ukuthi sibuyele kwa-novella wokuqala ukuthola imithombo yolwazi, siwuhlonipha impela umsebenzi kaClive. Ngingasho ukuthi uDavid Bruckner ungungqondongqondo. Iyaqopha njengamanje. Izithombe ziyesabeka futhi ziyamangaza, kanti amaCenobite asemhlathini. ” UGoyer utshele uCollider.
Ngiyathanda ukuthi uBruckner uthatha indaba ngokungathi sína. Umqondo wokuthi ubuyela kuClive Barker Inhliziyo Yesihogo yizindaba ezimnandi nalokho impela fan okudinga ukukuzwa.
Eyokuqala emibili I-Hellraiser amafilimu avelele futhi ahlaselwa futhi asongelwa kuze kube yilolu suku. Ngakho-ke, lokhu kunokuningi okumele uphile ngakho. Ukuqoshwa kwefilimu okwamanje kuyaqhubeka eSerbia ngenhloso yokukhishwa ngo-2022 kuHulu.
Ingabe ujabulile nge- I-Hellraiser uqalise kabusha kusuka kuBruckner? Sazise esigabeni sokuphawula.